Maxaaa keena Kansarka Naasaha (Breast Cancer) | Goobsan Media Inc
Home Caafimaadka Maxaaa keena Kansarka Naasaha (Breast Cancer)
Maxaaa keena Kansarka Naasaha (Breast Cancer)
Dhamaan burooyinka waxa kordha cabirkooda, laakiin qaar baa dhakhso u kora, qaarna koriinkoodu uu gaabiyaa. Unugyada kansarku waxay ku fidi karaan qaybaha kale ee jirka iyaga oo maraya hababka dhiigga iyo dheecaanka (lymph). Waxana taa loo yaqaanaa “metastasis”.
# In dhakhtarkaagu kuu sameeyo baadhitaan sannadkii mar haddii aad ka weyn tahay 40 jir. Badanaa waxa baadhitanadan loo sameeya tiro intaa ka yar haweenka da’da yar.
# Isa saar raajada naasaha sannad kasta hadii da’daadu ka weyn tahay 40.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka baaritaanka dheecaanka iyo cadka (biopsy) iyo nooca kansarka, adiga iyo dhakhtarkaaga ayaa go’aan ka gaari doona daweynta ugu haboon ee kansarka naaskaaga.
Waxa la saaraa naaska oo dhan, taasoo loo yaqaano “mastectomy”, ama waxa la saaraa qayb ka tirsan naaska, taasoo loo yaqaano “lumpectomy”. Labada qalitaan noocii la sameeyaba, waxa kansar laga eegi doonaa guntimaha/qanjirada dheecaanka (lymph nodes) ee ku yaala kilkilada. Waxa kale oo adiga iyo dhakhtarkaagu ka hadli kartaan qalitaanka dib-u-dhisidda.
# Daweynta hormoonka waa dawo ah kiniin oo la qaato si ay lid ugu noqoto maadada “estrogen”? ee ku jirta jirka. Waxyeelada ugu badan waa caalamadaha dhalmo-dayska.